Cumar Maxamuud Cilmi (Cumar Carabey) oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada maamulka degmada Afgooye ayaa ku dhaawacmay qarax shalay casar gaabkii ka dhacay goob uu ku sugnaa oo ku taala gudaha degmadaas ka dib markii kooxo hubeysan ay bam ku tuureen.
Cumar Carabey oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in dhaawaciisa uu aad u fudud yahay aysana jirin waxyeelo weyn oo qaraxaas ka soo gaartay.
“Waa fiicanahay wax dhibaato ah ma qabo, dhowr firir oo yar yar ayaa meelo ka mid ah jirka dhaawacyo fudud oo xagtin ah gaarsiiyey, howsheyda ayaana wataa hadda waa na socdaa Ilaahay Mahadiis” ayuu intaa ku daray Cumar Carabey.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Afgooye ayaa sheegay in qaraxaas ay ka dambeeyeen Al-Shabaab, ayna doonayeen iney isaga ku qaarajiyaan balse uu ka badbaaday, wuxuuna xusay in labo qof oo kale ay dhaawacyo fudud soo gaareen.
“Falalka noocan ah ee nabadiidku ku kacayaan nama cabsi gelineyso, howlaha aan bulshada u haynana waa sii wadaynaa, cadowgana guul daro ayuu ku dambeyn doonaa” ayuu intaa ku daray Cumar Carabey.